Tatitran’ny solombavam’bahoaka anio 21 avril 2018. Ireo antsipiriany. – jEreo Ato
Co-fondateur de jEreoAto, Lead Web Developer et Machine Learning Engineer. Je publie ici sur ce que j'apprends, mes passions et tous ce qui mérite d'être publié. Publié le 21 avril 2018 30 mai 2018 - 2 minutes de lecture Catégories Politique
Androany asabotsy 21 avril ny fotoana hanataterahana ny fampahafantarana ataoan’ny solom-bavambahoakan’i Madagasikara, izay atao eo parvis, kianjan’ny 13 mai.
Fampatsiahivany ny niantombohany :
Nanolotra “Projet de loi” hifehezana ny fifidianana ny governementa. Projet de loi izay tsy ankasitrahan ny mpanohitra ny fitondrana. Nizarao roa ireo deputé t@ antenimieram-pirenena 76 manohana ny fitondrana, ary 73 ny vondron’ireo mpanohatra ny fitondrana.
Ny faran’ny volana martsa, dia nisy ny session extra-ordinaire nataon’ireo deputé handaniana izany lalam-pifidianana izany. Nolavin’ireo deputé maro an’isa foana anefa izany. Ary no-“assejournée”-na intelo miantoana ny fandanin an’izany.
Heno fa nampivory ireo deputé sasan’tsasany tany @ hotely Paon d’or ny governemlanta sy ny atoko manohan ny fitondrana HVM. Ary heno (niaraka t@porofo) fa nisy 50 million d’ariary nozaraina t@ireo deputé tonga nivory ho tambin’ny hifidianana ity lalana hafahafa ity.
Tampoka teo, ny 03 avril 2018, lany tokoa teny @antenimieram’pirenena ilay lalàna.
Nametraka fitoriana teny @ bianco sy HCC ireo deputé 73 mpanohatra noho io kolikoly io.
20 Avril – Hariva
Ny zoma 20 avril dia efa feno mpitandro ny filaminana teny analakely, nanodidina ny hotel de ville.
21 avril – tapan voalohany – Sakoroka : 09h30 – 12h30
Tonga maro ny vahoaka namaly ny antso nataon’ireo deputé. Etsy ankilany, ny mpitandro filaminana ihany koa dia efa vonona t@fanakanana na barrage nataon’izy ireo. Tsy nampihemotra ny vahoaka anefa izay. Vokany, nanparitaka ireo vahoaka ny mpitandro ny filaminana t@alalan’ny “Bombe lacrimogène” maro dia maro.
10h30 : Nokasihin’ny mpitandro filaminana tanana ny deputé Rosy.
11h30 : Nanao fanambarana tao @radio Free FM ny filohan’ny Croix rouge Madagascar fa nahita maso mivantana mpitandro filaminana nanipy “Bombe lacrimogène” tao @ la cours’ny toerana fitsaboana ny zaza.
Heno fa nisy tifitra, tamin’ny “balle réel” tsy latsakin’ny telo nandritra izay fanamparitahana izany.
Nisy voa t@handriny
Nisy voa t@kibony
Ary nisy voa @hatokany
Fantatra fa namoy ny ainy ny iray t@ireo dia rehefa nohentinba teny @hopitaly.
21 avril – tapan faharoa – Fanomanana sy fanombohana : 12h30 –
13h : Tafiditra ao @parvis ihiany ireo vahoaka sy ireo deputé.
13h33 : Tafapetra ny fanamafinsam’peo hanaovana ny tatitra.
17h30 : Manao ny fanambarana ny deputé Maitre Hanitra sy ny lehibe ny CRGN
4 no maty nohon’ny lacrymogène nataon’ny “mpitandro filaminana
Tsy nisy ny tatitra fa fanambarana fohy no natao.
Hitohy amin’ny Alatsinainy ny fihetsiketsehana.